Robotrading ama Trading Buugga - Blockchain News
Robotrading ama Trading Buugga
Robotrading waa geedi socodka la isticmaalayo set ah tilmaamaha hordhigayo dalab si gato ama la iibsado saamiyo, lacag, ama cryptocurrency. set edbinta wuxuu ku salaysan yahay suuqa tilmaamayaasha kala duwan, oo ay ku jiraan qiimaha, waqtiga, mugga, iyo kuwa kale. Marka ganacsatada helayso daal iyo aadan haysan waqti ay gacanta ku ganacsan, ay ka fikiraan u dhaqaaqo robotrading. Laakiin marinka in ay galaan goobta this waa qaali, gaar ahaan qofka aan lahayn waxbarasho dhaqaale ama farsamo gaar ah.
About kala guurka ah si ay robotrading iyo wakhtiga firaaqada
Haddii Maal gaarka ah diiradda saarayaa faa'iidada, fahamsan yahay farqiga u dhexeeya ganacsiga Buugga iyo iswada, oo uu leeyahay qaar ka mid ah xirfadaha barnaamijyada, ay tahay in ay ugu yaraan ka fikirto wareegaya biraha si toos ah. The waxtarka iyo baaxadda shaqada ayaa kor u: dadka kaliya oofin badan oo ka wanaagsan. By ganacsiga si toos ah aad dabooli kara is-weydaarsiga oo dheeraad ah, isticmaalaan qalab iyo xeelado dheeraad ah. Laakiin taasi micnaheedu ma aha in aadan u baahan tahay si ay ula socdaan howlgallada si toos ah sida kuwa gacanta laga. Ha illoobin ah oo ku saabsan la socodka, waxaa mar walba muhiim ah in indhahaagana fur.
ganacsiga kasta, in buuggan ama algorithmic, waxay u baahan tahay dadaal iyo ka qaybgalka buuxa ee geedi socodka. Haddii aad rabto si ay u helaan, aad ku gadaneyso waqti badan on ganacsiga. Sida habboon, waa in aad maalin dhan ka shaqeeya, marka aad ma ahan oo keliya ku qori kartaa code oo tag nasato. Dabcan, aadan ayaa lagu lifaaqi doonaa oo kaliya in hal meel ah, waxaad awoodi doontaa inaad u safartid adduunka oo dhan u noqon doonaa, laakiin keliya haddii aad had iyo jeer yihiin online. Laakiin waa xaqiiqo ah ma ku saabsan jiifa leexo a wuxuu hoos fadhiyey geed oo timir ah maalmo.
About lacag Fiat iyo cryptocurrency
In la eego barnaamijyada, ma jiro wax farqi u dhexeeya waxa aad tahay ganacsi, lacag Fiat ama cryptocurrency. Waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro nidaam ganacsi oo makaanik wanaagsan. Waxaa jira algorithms in lagu wax ku ool ah loo isticmaali karaa in la lacagaha caadiga ah, cryptocurrencies, ama stock saamiga. Ma ahan muhiim waxa qalab waxaa laga dalbadaa entry. Maxaad leedihiin sameeyaa waa in ama aan xeerarka maldahan ee isku geynta soo tilmaamaan dhaqanka qalab si gaar ah loo xulay. Sidaas halkan waa su'aasha ku saabsan samaynta fikrad ganacsiga bilowga ah iyo istaraatijiyad. Si kastaba ha ahaatee, marka isku geynta la soo koraya, dhaqanka hanti ganacsi oo gaar ah waa la tixgeliyaa.
About faa'iidooyinka, halista iyo qalad nacasnimo ah
Faa'iidada ugu weyn ee ganacsiga iswada badan ganacsiga Buuggan waa la'aanta ah ee dareenka. Dadku waxay inta badan sameeyo go'aamo ku salaysan dareenka iyo shucuurta iyo waxa aanu had iyo jeer ma leeyihiin saamayn togan ku saabsan natiijooyinka, gaar ahaan waqtiyada muhiimka ah. Marka la barbardhigo, geynta fudud u qabata ay shaqada oo aan wax dareenka ama farax; waxa aanu go'aan ka sal-xagga farsamada ah oo ku saabsan istaraatijiyad si adag ku qeexan. Oo haddii geynta la bilaabay, ganacsade ah oo aan fara karo oo wax bedelo.
Dabcan, waxaa jira khataro, oo waxay sida caadiga ah khataraha suuqa. fikrad ganacsi oo isku geynta ayaa joojin kartaa kasban barta qaar ka mid ah marka kasta oo dhacdooyin aan la saadaalin karin iyo dhibaatooyinka ka dhacaan suuqa. aalado intooda badan aan loo raad raaco karo signalka. Waxaad heli doontaa si ay ula socdaan xaaladaha iyo bedesho aalado aad wakhtiga ama iyaga gab. Sidoo kale waxaa jira halis yar in-dhaafsiga gabi doono.
Waxaa intaa dheer, barnaamijyo mararka qaarkood laga yaabaa khalad doqon ah laakiin halis ah. geynta A fudud ayaa qiimaha iyo qiimaha. Dabcan, si uu ugu caddeeyo dakhliga, aad qiimaha waa in ay ka badan tahay in aad kharash. Haddii aad nixin, aad robot noqon doonaa wax tar lahayn. Inta badan newbies wajahayaan dhibaato this. Sidaas darteed, qalad aad u fudud marxalad kasta oo keenta in khasaare weyn.
Kasta oo xirfado gaar ah u noqon doonaa aad u faa'iido badan. By leh kasta oo xirfado gaar ah, ugu horayn ka dhigan tahay aqoon wanaagsan oo xisaabta iyo macquulka ah. Waxa ay u badan oo ku saabsan macquulka cad iyo fahamka sida wax loo qoro xeer ganacsiga rasmi ah halkii ku saabsan xisaabta, sababtoo ah uma baahnid inaad wax transformations aljabrada ee marxaladaha hore. Waxaa cad u kala soocnaadaan dareen ah oo ku saabsan sida ay u ganacsadaan oo awood u leh inay sharaxaad ka macquulka ganacsiga ee set rasmi ah dhacdooyinka iyo falalka. At tallaabo this, waxaan u baahan nahay aqoonta xisaabta. Sidoo kale, xirfadaha barnaamijyada iyo amarka luqadaha barnaamijka asaasiga ah (tusaale ahaan, “C ah”) waa lagama maarmaan.
About dhacyada ka
Mararka qaarkood waxaad u muuqdaan in ay la timaado istiraatijiyad faa'iido, cajiib ah oo fikrad ganacsi oo ka shaqeeya. Waxaad ku miisaantaan ilaa barnaamij kasta oo Qaabaynta xisaabeed, tusaale ahaan, Mathcad. Markaasuu, aad eegto xogta, qorshee model xogta a, oo la xisaabiyo loo baahan yahay. Ka dib markii in, aad ka mid ah oo dhan guddiyada iyo dulsaar ah, iyo wax walba oo ka shaqeeya wanaagsan. By habka, ma, ma samayn naftaada kid, waxaa ka mid ah dhammaan lacagaha, waxaa muhiim ah. Laakiin markaas waxaad ogaatay in hirgelinta farsamo ee aad fikrad u baahan yahay lacag ka badan inta aad kasban kartaa fikrad this.
Beri baa ah, mid ka mid ah Maal-gaarka ah sameeyey robot ganacsi oo weyn, Eygan ayaa loo magacaabay. Waxaa ahbaa ah 8,000% ku soo laabto muddo saddex bilood ku dhow khatarta hore ma. Eygan ayaa la falanqeeyey, ku warameyso jariirada badan, laakiin si fiican ayey shaqeeyay. Laakiin waxa uu ahaa in robot ah lacagtan laga sameeyey caasimada hore ee 1 kun, halka taageerada bil kaabayaasha oo dhan farsamada loo baahan yahay in la joogteeyo kharashka mashruuca ku wareegsan ah 10 kun. Sayidka, waxaa markii hore waxay ahayd cilmi baaris aan wax tar lahayn, maxaa yeelay waxa ay xitaa ma dabooli doonaa dhammaan kharashaadka korontada, server awood iyo kombiyuutarada fulinta xisaabaha mashruuca Gaar ahaan, waa mid la xusuusto in dakhliga robot ma yihiin had iyo jeer sare, laakiin lacagta masruufka waa in la bixiyo si tartiib ah. Sidaas, waxaa muhiim ah in loo xisaabiyo ma aha oo kaliya sida si ay u helaan, laakiin sidoo kale inta aad ku qaataan si ay u helaan.
lacag About soomi
Waxaa cad in aalado lagu qaybiyay kartaa kala duwan, waxay ku xiran tahay mugga ganacsiga, waxa xoojiyo iyo deynta waxaa loo isticmaalaa marka ganacsiga, haddii aad lacagta maal gelin on adiga kuu gaar ah ama qof wakiil, iwm. Waxaa jira wax badan oo Gudigga. Laakiin guud ahaan, aad u yar heli karo by yar sannad ku dhawaad ​​khatarta lahayn by Ganacsi muddo toban sanadood ah ee 10% sanadkiiba, ama waxaad isku dayi kartaa in aad ku ganacsan hal sano 100%.
Laakiin waxaa jira sharci ee suuqa saamiyada in aadan awood u yeelan doonaan in ay khiyaameeyaan - sare laabashada iman kara, weyn halista ka iman karta. Waa sida xoogga leh sida caadiga ah ee baahida iyo. Sidaas, haddii aad tirin on lacag badan, diyaar u ah khasaaraha weyn noqon. Xeerkani aan la baajin karin, waana in la tixgeliyo marka ay timaado inuu ku soo laabto on maalgashiga (ROI) ama faa'iidada ganacsiga algorithmic.
About dhufto ee loogu talagalay newbies
Waxaa jira qaar ka mid ah dhufto in oggolaado qof kasta ganacsiga aan xirfadda Trading. Tusaale ahaan, Libertex waa madal ugu caansan, laakiin waxaa jira kuwo kale oo badan. Waa dookh fiican u yahay newbie ah in ay isku dayaan oo aan arko sida ay u dhan shuqullada.
guryaha dhisa Large ee Ireland si ay u aqbalaan Seeraar
Ballyclare ku salaysan Hag ...
Post Next:Payment karbaash operator diido Seeraar